Tag: ọdịnaya anya | Martech Zone
Tag: ọdịnaya anya
N’ọnwa a ka anyị na ndị ahịa anyị nwere foto 2, vidiyo na-adịghị mma, yana vidiyo na-edu ndu… niile iji hazie saịtị na ọdịnaya ndị ahịa anyị. Oge ọ bụla anyị gbanwere eserese ngwaahịa na vidiyo na saịtị ndị ahịa wee dochie ya na foto nke ụlọ ọrụ ha, ndị ọrụ ha, na ndị ahịa ha… ọ na-agbanwe saịtị ahụ, na njikọ aka na mgbanwe na-abawanye. Ọ bụ otu n'ime ihe aghụghọ ndị ahụ anyị anaghị achọpụta mgbe anyị hụrụ saịtị, mana
Ọdịnaya Visual Na-akpali Nghọta, Mmekọrịta na Ntugharị na Social Media
Ànyị etiwo mkpu banyere ihe ndị a na-ahụ anya? Echeghị m otú ahụ. Anyị ekenyelarị akwụkwọ akụkọ ole na ole na akụkọ gbasara akụkọ yana otu esi etinye ọtụtụ ụdị ọdịnaya anya na-aga n'ihu. Anọ m na-akọwa usoro a na onye na-ere ahịa mpaghara n'izu a ma ha na-enwe oge siri ike ikwenye na mmetụta ọdịnaya ọdịnaya ụbọchị na-akọrọ n'ịntanetị nwere ike inyere azụmahịa ha aka. Mgbe m nọ ebe ahụ, m weere 10
Ike nke Infographic Marketing… Na adọ Aka ná Ntị
Sunday, October 5, 2014 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Akwụkwọ a na ọtụtụ ọrụ anyị na-arụrụ ndị ahịa gụnyere ọdịnaya anya. Ọ na-arụ ọrụ… ndị na-ege anyị ntị toro nke ukwuu na-elekwasị anya na ọdịnaya anya na anyị enyerela ndị ahịa anyị aka ịbawanye iru ha na ọdịnaya anya akụkụ nke ngwakọta. Nke a na infographic nke Market Domination Media kere iji gosipụta ike nke ọdịnaya anya. Ọ bụghị ihe nzuzo na ndị na-azụ ahịa na-azaghachi nke ọma na ahịa a na-ahụ anya, nke a bụkwa
Anaghị m emegide mgbasa ozi na ịkwụ ụgwọ maka nkwalite, mana ọtụtụ ndị nwere azụmaahịa na ọbụna ụfọdụ ndị ahịa anaghị amata ọdịiche dị. Ọtụtụ mgbe, a na-ahụ ahịa mmadụ dị ka ọwa ọzọ. Ọ bụ ezie na ọ bụ usoro ọzọ iji gbakwunye na ahịa gị, mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-enye ohere dị iche iche. Mgbasa mgbasa ozi na-akpaghasị mgbasa ozi mgbasa ozi kemgbe ọ malitere na ọnọdụ ahụ ma nye usoro nlele egwu nke ndị ahịa na-atụ anya ya. Na
Ihe Odide Akara Akara Ga Ga Arụ Ọrụ? Wzọ 5 Mara
Fraịdee, June 20, 2014 Fraịdee, June 20, 2014 Kelsey Cox
Ọdịnaya ejiri ahaghị otu dabara. Ihe na-arụ ọrụ maka otu akara nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ maka mmadụ niile, ọ dịkwa mma ịmara ma ọ bụrụ na echiche ọdịnaya gị nwere ike rụọ ọrụ tupu ị wụsa ihe eji eme ya. Kọlụm ise ewepụtala ajụjụ 5 ị nwere ike ịjụ onwe gị na ndị otu gị iji hụ ma echiche gị ndị mara mma ga-atụgharị site na nzukọ nzukọ gaa na ndị na-ege gị ntị na n'ikpeazụ, ihe ịga nke ọma maka akara gị. Ihe mbụ
Wednesday, September 11, 2013 Wednesday, September 11, 2013 Douglas Karr
B2B Marketing Infographics na nso nso a kere ihe omuma iji mee nlezianya anya na ọnụ ọgụgụ na-adọrọ mmasị sitere na Heidi Cohen na iji ọdịnaya anya na mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta. Ọnụ ọgụgụ a nyere na-akpali akpali na atụmatụ ọ bụla nke ụlọ ọrụ gị ugbu a ga-abụ nke ihe nkiri na-achịkwa. Ndị nkwusa na-eji infographics dị ka ngwa ahịa ahịa ha nwere ike iwelie okporo ụzọ ha site na 12%. Foto na-amasị okpukpu abụọ ka mmelite ederede na Facebook. 94% karịa ngụkọta
Reachli: Netwọk Mgbasa Ozi Anya
Mọnde, Febụwarị 25, 2013 Mọnde, Febụwarị 25, 2013 Douglas Karr
Anyị ekekọrịtala usoro nkwanye ọdịnaya ndị ọzọ dị ka Outbrain. Kedu ihe ma ọ bụrụ na ọdịnaya gị abụghị ederede na ọdịdị, agbanyeghị, ọ na-ahụkarị - dị ka Kupọns, eserese ozi, eserese ahịa, ịkpọ oku na ime ihe ma ọ bụ foto? Reachli bụ netwọkụ mgbasa ozi ọhụụ. Reachli nwere ihe karịrị ndị mgbasa ozi 70,000 nke na-enweta ihe karịrị 3.5 nde elekere kwa ọnwa! Reachli nwere teknụzụ nwere njikọ abụọ na egwuregwu na-eji isiokwu, onodu, na foto dabara na algorithms iji tinye ihe oyiyi ọ bụla dị na weebụ yana